musha ASIAN FOOTBALL STORI Fyodor Smolov Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane July 23, 2018
LB inopa Nyaya Yese yeRussia Football Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "Fedor". Yedu Fyodor Smolov Childhood Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye vazhinji BUSA-Pasi chokwadi (hachizivikanwi) pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva Fyodor akawana zvidimbu zvezvinangwa mubasa rake. Kunyange zvakadaro, maoko mashoma mafiki anoziva zvakawanda nezveFyodor Smolov's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Fyodor Smolov Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Fyodor Mikhaylovich Smolov akaberekwa musi we 9th waFebruary 1990 kuna amai vake, Irina Smolova uye baba, Mikhail Smolov muSaratov, Southwestern Russia. Akaberekwa ari iye oga mwanakomana uye mwana wezvidzidzo zvake zvekuchengetedza.
Semwana, mhuri yaFyodor yaigara mumharaunda yakapoteredzwa nemhosva yeRussia yeSaratov iri kunze kweguta. Izvi zvakaita kuti vabereki vake vawane nzira dzakasiyana-siyana dzokudzivirira mwanakomana wavo kubva pakuipa kwevakomana. Mune imwe nzira kuti arege kutora mwanakomana wake achivhiringidza neshamwari dzakaipa, baba vake Mikhail vakatora Fyodor kumusha wavo wekambani yebhola, Sokol yekunyora. Zvinosuruvarisa, Fyodor Smolov akanga asiri we fan of club yake yebhora yebhola yebhora (Sokol Saratov) apo baba vake vakamutora kuti atange huduku hwake. Mwoyo wake waiva nawo "Lokomotiv Moscow" iri muRussia guta guru. Apa ndipo paakarota kutanga kutanga basa rake.
Akanga arota kuva nhengo yekambani rimwe zuva. Sezvo aiziva kuti kwakanga kusina mari yekuita kuti zviitike, Fyodor Smolov akaenderera mberi nekambani yaasina kutsigira. Chisarudzo chababa vake chaiva nemigumisiro yakaipa pahuduku hwake kubudirira.
Fyodor Smolov akaramba achiedza kurarama nevechidiki. Akatadza kukanganisa mavhesi ebhodhi panguva ye 14. Ino ndiyo nguva baba vake vakatanga kunzwa kuti mwana wavo wechidiki akanga asungirirwa uye akaneta nemutambo wacho. Baba vake vakabva vaomerera kuti mwanakomana wavo atore rugwaro rwekupedzisira rwebhokisi panguva ino, kubva kune rimwe kambani. Mikhail akagumisa kuti mwanakomana wake aizorega bhora kana asina kubudirira mukuongorora kwechina kuchiuya.
Nenzira yakanaka, Fyodor akapfuura muongorori kubva mubato rebhokisi rematambo Master Saturn kubva kuYgoryevsk, nzvimbo yeMoscow. Vakabvuma nemufaro mukomana wechidiki akavimbisa uye Fyodor akaenderera mberi nekuziva unyanzvi hwake mumutambo wake waaida. Akazopedzisira apedza basa rake revechiduku paSaturn Moscow kwaakamboita pakati pe2006 kusvika ku2007.
Pa16, Fyodor Smolov akasaina chibvumirano chekutanga chezvesheni neDhinamo Moscow. Panguva ino, akazova nechinangwa chakasimba chekuita kuti kurota kwake kuzadzike uye vavariro dzake kuva mhando yemashandi yakanga isiri kungofambisa. Sezvakaitika panhau yebasa rake, tiye anozorora, sezvavanotaura, iye zvino nhoroondo.
Fyodor Smolov Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pasi pemunhu wese mukuru, pane mukadzi mukuru, kana kuti shoko racho rinoenda. Uye shure kwevose vanobudirira muRussia mutsara, kune mudzimai akanaka, wag kana musikana. Pasina mubvunzo, kukwanisa kweFyodor kukanganisa, uyewo mararamiro ake kunze kwemukati anovaka mufananidzo wakakwana wake.
Muna 2012, akasangana neRussian model neTV, VaLictoria Lopyreva pamusangano wake (Yuri Zhirkov) wekuberekwa. Kutarisa kubva pakunaka kwake, zvinokosha kutaura kuti Victoria ndiye akakunda Miss Russia 2003 peji.
Imwe pfungwa inokosha yekucherechedza ndeyokuti; Victoria Lopyreva ane makore 7 akakura kupfuura murume wake. Izvozvi, zvisinei, hazvina kudzivisa ukama hwavo hwekudanana hwakanyanya kubva pakukura uye hunonyanya kukosha, kuroorwa kwechato chakaitika mune imwechete [kwete-ring] chimiro. Muna Zvita 2013, shamwari dzerudo; Lopyreva naFyodor vaive nemuchato wakanaka uye une rudo muMaldives. Imba yavo yaingove yemakore maviri vasati varambana. Mapato ese ari maviri akarega kutaura muna Chikunguru 2016.
Chikonzero chakakwana chekurambana kwavo chiri pasi apa muFyodor Smolov Family Facts sezvakatsanangurwa mummai waFyodor. Mharidzo yeRussia, zvisinei, yakashuma kuti kurambana kwakauya sezvo Fyodor Smolov aipomerwa kuti aona Miranda Shelia, mumwe mutauro weRussia wakaratidzwa pasi apa.
Zvakakosha kucherechedza kuti Miranda (inoratidzwa pamusoro apa) kazhinji inofananidzwa ne Irina Shayk, mumwe muenzaniso wakanaka waimbova Cristiano Ronaldo 's lover. Mushure mokunge rusarudzo dzeRussia dzisina kusimba muZimbabwe Championship dzeEurope UEFA, Fyodor akaputsa nemusikana wake Miranda Shelia.
Zvakare, mukuwa kwe2016, mhizha dzeRussia dzakashuma rudo rwekambani rwakatanga kutamba naSofia Nikitchuk uyo aiva 2015 Miss Russia anokunda.
Fyodor Smolov Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Family Facts
Amai: Irina Smolova akafananidzirwa pasi ne mwana wake anodiwa ndiamai vaFyodor.
Amai vaFedor Smolov vakatanga kutaura pachena pamusoro pokurambana kwomwanakomana wavo nemuenzaniso uye muterevhizi weTV Victoria Lopyreva. Akabvuma kuti mwoyo wemwanakomana wake wakaputsika nemudzimai wake uyo akatora nguva yakawanda achitarisira basa rake uye kwete zvemurume wake mupfungwa uye mune zvaanoda.
Irina akacherechedza kuti vose mutambi uye muenzaniso wakave kuburikidza nekuputsa kunorwadza. Iye naVictoria vaiva neukama hwakanaka kwazvo, uye vaimbova muroora-mukomana vaimutumidza amai. Mumashoko ake ...
"Mumakore matatu avakanga vari pamwe chete, ndakavaka hukama hwakanaka naye, zvaive zvinobaya mwoyo uye zvinyengedza, paakanditumidza kuti Amai. Vika neni tinotaura nenzira yakakwana iye zvino ".
"Handikwanise kutaura, hongu, asi zvichida vakanga vasina kukwanisa kuchengetedza ukama hwavo. Nokuti Fyodor yakanga yakaoma zvakakwana: Ndinofunga, iye aimuda. Pamwe pane imwe nguva, kureba kwakatora basa rakaipa.
Apo Fyodor ari kudzidzira pamusasa wekudzidzira, Victoria anoshandawo achiita basa - iye muterevhizheni weTV uye mufashoni wemafashoni, anowanzobudirira, achida zvikuru uye basa rake rinoda kushanda nesimba. Pane imwe nzvimbo, iyo inopera, kwaiva kusava nenguva kweFyodor. Ndiye mumwe munhu anoda imba nyaradzo, tarisa. Zvichida ndicho chikonzero musikana anosarudza kuva naye, anofanirwa kukodzera iye ".
anodaro Irina Smolova (amai vaFyodor Smolov).
Fyodor Smolov Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Personal Life Facts
Fyodor Smolov anoda matanho. Mutambi wemutambo aiva nekambani yake yekutanga ku17 uye iye zvino, haagoni kutaura kuti ane mazamu akawanda akaita sei. Mifananidzo yake yose ikozvino futi uye inogadzira mifananidzo imwe chete yemifananidzo sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Anotsigira AC Milan kubvira munguva ye 1997 / 98 uye akambotaurwa George Weah uye Andriy Shevchenko sevakomana vake vanofarira vaduku.
Unoshayiwa Fyodor: Anomhanya kubva pakutaura mupfungwa. Kunyanya zvakadaro, aigona kunge akazvidzora, asingatendi uye asina ushamwari.
Chii chinonzi Fyodor: Haafariri zvipikirwa zvakaputsika, kusurukirwa, mamiriro ezvinhu asina kunaka kana kunetsa, vanhu vasingabvumirani naye.
Kutya kukuru kwaFyodor kuzviona iye oga kana kuti akamanikidzwa. Izvi zvinomuita kuti atonhora uye asinganzwisisiki. Zvisinei, ane chigadziro chekudzivirira kushamwaridzana kwenguva refu. Fyodor inoda kudzidza kudzidza kuvarume, uye kuratidza manzwiro ake nenzira ine utano.
Mutambi wenhabvu anofarirawo ruzivo rwekuverenga kubva pamazuva ake achiri mwana sezvinoratidzwa pasi apa.
Vapoteri vemapurisa vaMario Puzo naArturo Pérez-Reverte, manyozha aFyodor Dostoevsky, uye mabasa aMikhail Bulgakov ndiwo mabhuku aanofarira.
Fyodor Smolov Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Haasi Kufara neEurope Big Clubs
Panyaya inosuruvarisa, Fyodor Smolov akamboudza Maxim Online kuti makambani ekunze nguva dzose anonzwa asingadi kuisa vatambi vemuRussia. Mumashoko ake ...
Champions League-level mativi haazoperi munzira yavo kuti atipinza mukati. Ndakazviona panguva yewindo rekutsvaga. Ndakanga ndiine zvimwe zvipo, asi ivo vose vaiva zvikwereti vane kodzero yekutenga-kunze. Mahombekombe makuru eEurope anotitarisa sekugumburwa uye kuitisa.
Smolov yakawedzerwa kune imwe nzira inofanirwa kuEurope kana iri kuuya kuvatambi veRussia.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nokuverenga Fyodor Smolov Childhood Indaba yedu pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!